မလေးရှား သစ်လုပ်ငန်း ၌ အလုပ်သမား ရှားပါးမှု ပြဿနာ နှင့်ရင်ဆိုင် နေရ | AAR - သတင်းနှင့် ပြန်ကြားရေးဌာန
← မလေးရှားကျောင်းသူကို ဆေးတိုက်၍ အုပ်စုလိုက် အဓမ္မပြုကျင့်	တောက်ပတဲ့ အနာဂတ်တခုကို ဖော်ဆောင်ပေးခြင်း →	မလေးရှား သစ်လုပ်ငန်း ၌ အလုပ်သမား ရှားပါးမှု ပြဿနာ နှင့်ရင်ဆိုင် နေရ	Mar 18
မလေးရှား သစ်လုပ်ငန်း၌ အလုပ် သမား ရှားပါးမှု ပြဿနာ နှင့် ရင်ဆိုင် နေရသည့် အတွက် မြန်မာ အပါအ၀င် ပြည်ပနိုင်ငံ လေးခုမှ အလုပ်သမား များ ခေါ်ယူ တင်သွင်းရေး ဆိုင်ရာ မလေးရှား အစိုးရ ၏ လှုပ်ရှားမှုကို အဆိုပါ နိုင်ငံ အခြေစိုက် Sabah Timber Industries Association (STIA) က ကြိုဆို လိုက်သည်။
အဆိုပါ အစီအစဉ်အရ မလေး ရှား နိုင်ငံ၏ သစ်နှင့် နှီးနွှယ်သော လုပ်ငန်း ကဏ္ဍများ တွင် လုပ်သား လို အပ် ချက်များ ရှိနေ ကြောင်း၊ ထိုလုပ် ငန်းများ၏ ပြည်တွင်း အလုပ်သမား များ အပြင် ဖိလစ်ပိုင် နှင့် အင်ဒိုနီး ရှား နိုင်ငံများမှ အလုပ်သမားများ ၀င်ရောက် လုပ်ကိုင် နေသော်လည်း ရာခိုင်နှုန်း အားဖြင့် နှိုင်းယှဉ် ပါက လုပ်သား လိုအပ်မှု ပမာဏ မြင့်မား နေဆဲ ဖြစ်ကြောင်း၊ သို့ဖြစ်၍ သစ် ခုတ် လုပ်မှုနှင့် သစ် အချောထည်များ ထုတ်လုပ်မှု စီမံကိန်း များတွင် လိုအပ် သည့် လုပ်သား အရေအတွက် ပြည့်မီ ရန် မြန်မာ၊ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်၊ နီပေါ နှင့် ဗီယက်နမ် နိုင်ငံများမှ အလုပ်သမား ခေါ်ယူမည့် မလေးရှား အစိုးရ၏ အစီအစဉ် ကို ကြိုဆိုကြောင်း STIA ဥက္ကဌ Ybhg Datak Hwong က ပြောကြားသည်။
“မြန်မာ၊ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်၊ နီပေါ နဲ့ ဗီယက်နမ် နိုင်ငံတွေမှ လုပ်သား ခေါ်ယူမှု အစီအစဉ်ကို အမြန်ဆုံး လုပ် ဆောင် စေလိုပါတယ်။ ဘာကြောင့် လဲဆိုတော့ သစ်လုပ်ငန်း မှာ လုပ် သား လိုအပ်ချက်တွေ အများ အပြား ရှိနေလို့ပါ။ မလေးရှား သစ်လုပ်ငန်း ရဲ့ ကြီးမားတဲ့ အစဉ်အလာကို ထိန်း သိမ်း နိုင်ဖို့ ပရိဘောဂ ထုတ်လုပ်မှု ဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင် လုပ်သားတွေ အများကြီး လိုအပ် နေပါတယ်။ ပြည် တွင်း လုပ်သား ရှားပါးရင် ပြည်ပက ကျွမ်းကျင် လုပ်သားတွေကို နေရာ ပေး အသုံးပြု ရမှာပါပဲ” ဟု STIA ဥက္ကဋ္ဌက ဆိုသည်။
မြန်မာပို့စ် သတင်းဂျာနယ်မှ ကူးယူ ဖော်ပြသည်။
Posted on March 18, 2011, in သတင်းကဏ္ဍ. Bookmark the permalink.	Leaveacomment.	← မလေးရှားကျောင်းသူကို ဆေးတိုက်၍ အုပ်စုလိုက် အဓမ္မပြုကျင့်	တောက်ပတဲ့ အနာဂတ်တခုကို ဖော်ဆောင်ပေးခြင်း →	Leaveacomment